Idata edibeneyo kwiStatisti?
Ukulinganisa iinguqu ezimbini kwixesha elifanayo kwiBantu abemi abaNikwe
Idatha ebhaliweyo kubalo-manani, edlalwa ngokuba ngababini ababiniweyo, ibhekisela kwimimiselo emibini kubantu abemi abadibaniseneyo ndawonye ukuze banqume ukulungiswa phakathi kwabo. Ukuze i-data isetyenziswe ukuba ithathwe njengedatha ebambene, ixabiso leenkcukacha zifuneka ziqhotyoshelweyo okanye zixhunyelelane kwaye zingacatshangwanga ngokwahlukileyo.
Idatha yeenkcukacha ezibiniweyo zichasene nombutho oqhelekileyo wenani elinye kwiqela ngalinye leenkcukacha njengamanye amaqoqo eenkcukacha ezithintekayo kwinqanaba ngalinye leenkcukacha lidibaniswa namanani amabini, unikezela igrafu evumela ukuba oomatriki balondoloze ubudlelwane phakathi kwezi kubemi.
Le ndlela yedatha ebiniweyo isetyenziswe xa isifundo sifundela ukuthelekisa iimpawu ezimbini kubantu abathile babantu ukuba benze uhlobo lwesigqibo malunga nokulungelelaniswa okukhoyo. Xa ukujonga ezi ngongoma zedatha, umyalelo wokubambisana kubalulekile kuba inombolo yokuqala yinto ethile yento enye ngelixa yesibini imilinganiselo yento ehluke ngokupheleleyo.
Umzekelo Weenkcukacha Ezibiniweyo
Ukubona umzekelo weenkcukacha ezibiniweyo, cinga ukuba utitshala ubala inani lezabelo zasemakhaya ngamnye umfundi ujikelele kwiyunithi ethile kwaye emva kwababini beli nani kunye nepesenti zomfundi ngamnye kwi-unit test. Iimbini zilandelayo:
Umntu ogqityiwe izabelo ezili-10 wathola i-95% ekuvavanyeni kwakhe. (10, 95%)
Umntu ogqityiweyo izabelo ezi-5 wathola i-80% ekuvavanyeni kwakhe. (5, 80%)
Umntu ogqityiwe iimbopheleleko ezingu-9 wathola i-85% ekuvavanyeni kwakhe. (9, 85%)
Umntu ogqityiweyo imisebenzi emibili ufumane i-50% ekuvavanyeni kwakhe. (2, 50%)
Umntu ogqityiweyo izabelo ezi-5 ufumane i-60% ekuvavanyeni kwakhe. (5, 60%)
Umntu ogqityiweyo izabelo ezi-3 wathola i-70% ekuvavanyeni kwakhe. (3, 70%)
Kwinqanaba ngalinye leenkcukacha ezibiniweyo, sinokubona ukuba inani lezabelo lihlala liqala kuqala kwiqela elidibeneyo ngelixa ipesenteji ezuziweyo ekuvavanyeni kuza kwesibini, njengoko kubonwe kwimeko yokuqala (10, 95%).
Nangona uhlalutyo lwabalatha lwedatha lungasetyenziselwa ukubala inani eliqhelekileyo lezabelo zasemakhaya ezigqityiweyo okanye umlinganiselo wokuvavanya, kukho enye imibuzo yokubuza malunga nedatha. Kulo mzekelo, utitshala ufuna ukwazi ukuba kukho nayiphi na intsebenziswano phakathi kwenani lezabelo zasemakhaya eziphendulelweyo kunye nokusebenza ekuhlolweni, kwaye utitshala uya kufuneka ukuba agcine idatha idityanisiwe ukuze uphendule lo mbuzo.
Ukuhlalutya Iinkcukacha ezibiniweyo
Amanqanaba okubalwa kwamanani kunye nokulungiswa kokusetyenziswa asetyenziselwa ukuhlaziywa kwedatha edibeneyo apho i- coefficient coefficient iquanisa indlela idibanisa ngayo idatha ngokukhawuleza kwaye isebenzise amandla olwalamano oluhambelanayo.
Ukunyanzeliswa, ngakolunye uhlangothi, kusetyenziswa izicelo ezininzi kuquka ukucaca ukuba yeyiphi umgca ohambelana kakuhle nesethi yethu yedata. Lo mgca ungasetyenziselwa ukuqikelela okanye uqikelele ixabiso leenqobo zexabiso x ezingaba yinxalenye yesetyenzisi sethu sokuqala.
Kukho uhlobo olukhethekileyo lwegrafu olufanelekileyo ngokukodwa kwidatha ebiniweyo ebizwa ngokuba yi-scatterplot. Kuloluhlu lwegrafu , i-axis enye yokudibanisa imela ubuninzi bwedatha edibeneyo ngelixa elinye i-axis i-axis ibonisa enye inani leenkcukacha ezibiniweyo.
I-scatterplot yenkcukacha ekhankanywe apha ngasentla iya kuba ne-x-axis ichaza inani lezabelo eziphendulwe ngelixa i-y-axis ibonisa amanqaku kwi-unit test.
Iinkokheli zaseMpumalanga Ephakathi: Igalari yezithombe
UkuFunda Umculo: Amanqaku athinjiweyo
Ukunyuka kweNtaba yeDemokhrasi - i-Colorado Fourteener
I-7 yePiano Chords